Si fiican u fiirso naqshadeynta | Abuurista khadka tooska ah
Samee aragti fiican qaabeynta
Si loo horumariyo a fiiri naqshadeyntaWaa inaad naqdin noqotaa, lafagurtaa oo aad garataa naqshad wanaagsan, maaddaama aaggan ay ka jiraan nashqado aan tiro lahayn oo muuqda maalin kasta.
Waqtigan xaadirka ah, dadka ayaa lagu duqeynayaa noocyo badan oo naqshado ah Waxaa lagu soo bandhigaa barmaamijyo kala duwan, nooc kasta oo qaab ah, midab iyo cabbiraadaha suurtagalka ah, si kastaba ha noqotee, wax walbaa kuma soo baxaan inay noqdaan kuwo la yaab leh. Taasi waa sababta aan u dooneyno inaan uga hadalno qodobkaan qaar xeelado u oggolaanaya in lagu horumariyo aragti wanaagsan qaabeynta.
1 Istaraatiijiyooyinka loogu talagalay sameynta muuqaal wanaagsan qaabeynta
1.1 Raadi dhiirigelin iyo dhaleeceyn
1.2 Ku celceli muuqaalka, intaad fiirsato
Istaraatiijiyooyinka loogu talagalay sameynta muuqaal wanaagsan qaabeynta
Dhowr xeelado kaa caawin kara inaad horumariso eegista wanaagsan ee naqshadeynta waa:
Raadi dhiirigelin iyo dhaleeceyn
Samee galka laptop-kaaga iyo keydi wax kasta oo ku dhiirrigeliya muddo toddobaad ah. Kadib dhex gal galka oo isweydii qodobadan:
Sababtoo ah maxaa ku xiisaynaya naqshaddaas?
Muxuu yahay naqshaddu, sidee buu kuu saameynayaa?
Maxaad ku dareemaysaa naqshadaas?
Sideed u horumarin kartaa?
Su’aalahan fure u yihiin falanqaynta oo aad ka fikirto qaabeynta, taas oo ahayd waxa ku kalifay naqshadeeyaha inuu horumariyo sawirka, sawirka, qaabka, iwm., looma baahna inaad ka jawaabto mid kasta oo ka mid ah su'aalaha, inkasta oo ay tahay muhiim inaad maskaxda ku hayso oo u soo noolee.
Ma haysaa wax su'aalo ah oo ku saabsan halka laga raadsado tixraacyada? Hadaadan ogayn meesha laga helo tixraacyoWaxaa jira degello dhowr ah oo bixiya cusboonaysiinta soo noqnoqda, sida bogga Dribbble, InspirationGrid, Behance iyo Awwwards, oo ku habboon noocyada kala duwan ee mashaariicda.
Falanqaynta mid kasta oo ka mid ah fasallada tixraacyada la helay waxay abuuri kartaa inaad leedahay hal nooc oo muuqaal ah.
Waa laguu oggol yahay inaad aragto mid kasta oo ka mid ah fasalo farshaxan oo jira oo la fuliyo Dunida oo dhan, dhib malahan hadii ay ka soo muuqdaan joornaalada, boorarka iyo buugaagta, ha ku ekeynin internetka oo kaliya. Xitaa waad baari kartaa wadada adoo fiirinaya hareerahaaga markasta oo aad guriga ka baxaysid. U fiirsashada waa barasho!
Ku celceli muuqaalka, intaad fiirsato
Waxaa jira layliyo badan oo kuu oggolaanaya tabobar muuqaal wanaagsan qaabeyntaTusaale ahaan, waxaad ku qaadan kartaa daqiiqado yar inaad fiiriso iskuna daydo inaad fahanto aduunka kugu xeeran. Sidoo kale, ma daawan kartaa dhismayaasha inaad ku aragto wadada, calaamadaha, dabeecadda, iwm.
Markaad u isticmaaleyso adduunka iyo wax kasta oo hareerahaaga ah qalab aad ku horumarinayso aragtidaada, waa inaad tixgelisaa dhinacyadan:
Soo ogow waxa taasi waxay kugu haysaa dareenkaaga iyo sababtaada sababta ay u sameyso, maaddaama naqshadeynta ay ku saabsan tahay dareenka ugu horreeya.
Sidee ula falgashaa nashqadda kugu xeeran?
Midab noocee ah ayaa la adeegsadaa sidee bayse u wada shaqeeyaan?
Qaabku isbeddel ma sameynayaa? Sababta
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Samee aragti fiican qaabeynta
Sida loo dhigo astaan-biyood Photoshop